Enterprise Voice Solutions - Zimbabwe Telecom
Zimbabwe Telecom provides business quality voice solutions anywhere in Zimbabwe, no matter how remote, of premier quality and at highly competitive prices, and what’s more our services are backed by strict SLAs.
Zimbabwe Telecom delivers the complete package, from a single phone at a remote location to a centralised multi-site solution for voice, video conferencing, IM capability and even smart phone apps for users on the go. Whether over fibre or VoIP over VSAT we can provide a system for you to manage and control or have it all managed for you through our partner European multilingual 24/7 Network Operations Centre at Onlime teleport.
If you already have your own VoIP IP-PBX but are not happy with the quality of your VoIP provider in zimbabwe or internationally, we can provide the SIP trunks and work with you to migrate your users to our advanced platform.
If your users have smartphones, Zimbabwe Telecom will provide you with Apps for Apple, Android or Windows and they will be free to make VoIP calls or use our IM software on the go.
Please email the Zimbabwe Telecom sales team and find out more about how we can help.